किन देखिएन महिला लघुवित्त आइपीओको नजिता ५ घन्टासम्म ? जिम्मेवार निकाय सम्पर्क बिहीन — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > किन देखिएन महिला लघुवित्त आइपीओको नजिता ५ घन्टासम्म ? जिम्मेवार निकाय सम्पर्क बिहीन
काठमाडौं । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपीओ (साधारण सेयर)को नजिता थाहा पाउन नसकेर लगानीकर्ता हैरानीमा परेका छन् ।
सिडिएससीले अहिले आइपीओको नतिजा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई दिन प्रतिबन्ध लगाएर सिडिएससीको मेरो सेयर, बिक्री प्रबन्धक र आइपीओ निष्काशनकर्ता कम्पनीको वेवसाइटमा नै हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर मेरो सेयर प्रोसेसिङ मात्रै देखाउने, बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङको वेवसाइट नखुल्ने र आइपीओ निष्काशन कर्ता कम्पनी महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वेवसाइट पनि खुलेको छैन् ।
जसले गर्दा लगानीकर्ता आईपीओ बाँडफाँड भएको ५ घन्टासम्म पनि आफूलाई सेयर परेको वा नपरेको थाहा पाउनबाट बन्चित भएका छन् । यस विषयमा सम्पर्क गर्न खोज्दा सिडिएससीका कुनै अधिकारी पनि सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन् ।
लगानीकर्तालाई बिक्री प्रबन्धक तथा निष्काशन कर्ता कम्पनीभन्दा मेरो सेयर हेर्न बानी परेको र सजिलो हुने भएका कारण मेरो सेयर धेरैले खोल्दा अहिले लोड बढी देखिएको छ । यता सिडिएससीले सफ्टवयेरको क्षमता बढाएको बताएपनि शुक्रबार भने मेरो सेयर खुलेको छैन ।
२०७७ फागुुण १४ गते १२:५८ मा प्रकाशित
समाजसेवी गुरुङद्वारा ‘संस्कार समाज नेपाल’लाई ५ लाख सहयोग प्रदान
शेयर बजार २१ अंकले बढयो, अर्बभन्दा बढीको कारोबार
नेपाललाई विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति गराउन प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा अन्र्तराष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान
साग सञ्चालन र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारी पूराः मन्त्री विश्वकर्मा